Madaxweynaha Jubbaland oo Shir ay DF Somaliya soo qaban qaabisay ka furay Kismaayo + (SAWIRRO) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Madaxweynaha Jubbaland oo Shir ay DF Somaliya soo qaban qaabisay ka furay...
Madaxweynaha Jubbaland oo Shir ay DF Somaliya soo qaban qaabisay ka furay Kismaayo + (SAWIRRO)
Kismaayo (Halqaran.com) – Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland, mudane Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa Sabtidii maanta daah-furay shirka wasiirrada Maaliyada dalka oo diirada lagu saarayo maaraynta miisaaniyada dadweynaha iyo hanaanka dayn cafinta dalka.
Shirkan oo in mudo ah soo socday ayaa waxaa ka qaybgalaya Wasaarada Maaliyada Dowlada Federaalka ah iyo Dowladaha xubnaha ka ah.
Axmed Madoobe ayaa raja wanaagsan ka muujiyay in dalkeena laga cafiyo daynta uu adduunku ku leeyahay si ay usoo noqoto sharaftii iyo hufnaantii hanaanka maaliyada dalka taas oo ah wax mudo ay sugayeen shacabka Soomaaliyeed.
Dowladda Soomaaliya iyo Maamulka Jubbaland ayaa waxaa ka dhaxeeyay Khilaaf ka dhashay doorashadii Madaxweynaha Jubbaland ee Kismaayo ka dhacday oo dowladda Soomaaliya ay diiday inay aqoonsato.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa u muuqda mid ka guuleystay dowladda Federalka Soomaaliya, maadaama dowladda shir Maaliyadeed ay ku qabsaneyso Magaalada Kismaayo.
Axmed Madoobe oo daah furay shirka wasiirada maaliyadda